“Waan Ku Diirsaday Qalin-jabinta Walaashay” Aqoonyahanad Guddoon-QAADIRO | HAYAAN NEWS
“Waan Ku Diirsaday Qalin-jabinta Walaashay” Aqoonyahanad Guddoon-QAADIRO
Hargeysa(Hayaannews): Aqoonyahanad Gudoon Axmed Cabdilaahi ayaa bogaadin iyo tallo u dirtay Jaamiciyad Nimco Xariir Ismaaciil oo ka mid ahayd dufcadii 14aad ee ka qalin-jabisay Jaamacada Hargeysa maalintii shalay ee Arbacada ahayd taariikhduna ahayd 19/9/2017.
“Waxaan kula talinayaa walaashay, Aqoonyahanad Nimco Xariir Ismaaciil inaanay maanta waxbarashadii dhamaynin, balse ay heshay furihii waxbarashada waxaan u soo jeedinayaa inaanay halkaasi ku joojin ee ay sii wado waxbarashada ILAAHAY-na waxaan uga baryayaa aqoonta ay baratay inay ku anfacdo dadkeeda iyo dalkeeda. Marka inani wax-barato waxay ka dhigan tahay in qoys wax la baray. Qalinjabintaatadu sidaas ayay muhiimad u leedahay, oo qaran iyo qoys-ba waad anfacaysaa”Ayey tidhi Aqoonyahad Gudoon Qaadiro.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi“Waalidiinta waxaan u soo jeedinayaa inay wax-baraan Hablaha, maadama ay yihiin laf-dhabarta qoyska iyo guud ahaan Musjtamaceenna…..ballanteenu waa inaynu waxbaranaa oo hablaha Jaamiciin laga dhigaa” Guddoon Axmed Cabdillaahi (Guddoon qaaddiro)
Aqoonyahanad Nimco Xariir Ismaaciil